Mitsubishi Colt Plus 2009 (#666036) ကို Tamwe မြို့နယ်တွင... | CarsDB
Lot Number: #666036
အတွက် အိမ်စီးတစ်လက်ကိုင် Colt Plus အသန့်လေးတစ်စီးရောင်းပေးပါမည်၊
Number - YGN 2I ××××
Engine - 1500CC , AUTO 2WD ,
Gray Colour . TV & Back Cam
Power window4. Remote Key ပါ
Remote ဖြင့်မှန်ချိုး မှန်ခေါက် မှန်တင် ပြုလုပ်နိုင်
Remote ဖြင့်နောက်ဖုံးဖွင့်နိုင် နောက်ဖုံးမော်တာပါ
အတွင်းခန်းအလွန်သန့် မှန်ချိုးမှန်ခေါက် မှန်ချိန်မီးချိန်
ရှေ့ထိုင်ခုံဆက် ရှေ့လက်တင်ပါ နောက်လက်တင်ပါ
လိုအပ်တာအာလုံးပြုပြင်ပြီး , အရိုးဆစ်ကောင်း
Price - 158 သိန်း
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Ko Tun မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Mitsubishi Colt Plus 2009 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။